बढ्यो रेमिट्यान्स, मंसिरमा कति भित्रियो ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १६:४६ English
बढ्यो रेमिट्यान्स, मंसिरमा कति भित्रियो ?
काठमाडौँ, ६ माघ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पाँचौ महिनामा रेमिट्यान्स बढेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवदेनमा रेमिटेन्स ०.१ प्रतिशतले बढेको देखाईएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मंसिर मसान्तसम्म ३ खर्ब ७६ अर्ब ९९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा भदौमा ०.३ प्रतिशले घटेको थियो । असोजमा ४.९ प्रतिशतले घटेको रेमिट्यान्स कार्तिकमा २.३ प्रतिशते ओरालो लागेको थियो । तर मंसिरमा भने रेमिट्यान्स सामान्य वृद्धि भएको छ ।
६ माघ २०७६, सोमबार ०९:४२ मा प्रकाशित
सुनको भाउ हालसम्मकै महँगो	९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ११:४०
सुनको भाउ इतिहासकै नयाँ उचाईँमा	८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ११:०४
८ स्थानीय तह बैंकिङ पहुँच बाहिर	६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १७:३४
सुनको भाउले बनायो नयाँ रेकर्ड	६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १२:५५
निगमले घटायो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य	५ फाल्गुन २०७६, सोमबार १८:३०
राजमार्ग छेउको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउँदै सरकार	२३ माघ २०७६, बिहीबार १०:३६